Nkọwa okwu ụlọ ọrụ na -aga ebe a
Ụlọ ọrụ anyị na -akpachapụ anya nke ọma n'ịhụ na nchekwa na afọ ojuju ndị ahịa bụ ihe kachasị mkpa n'echiche ya.
Hebei Juren Hoisting Machinery Co., Ltd. dị na Baoding Qingyuan District, Baoding City, Hebei Province, nke ama ama maka ịkwalite. E hiwere ya na 1992. Site na mmepe ihe karịrị afọ 20, ọ zụlitela ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọkachamara ọkachamara a na -akwanyere ùgwù nke nwere ezigbo aha dị ka ndị na -emepụta ihe ọhụrụ, ndị na -emepụta ihe na ndị na -ekesa igwe.
Anyị bụ ndị nrụpụta igwe na -ebuli elu dị ka eriri eletriki, ihe agbụ agbụ, ihe mgbochi lever, gwongworo pallet na ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike iwepụta ngwaahịa dị iche iche ma ọ bụ igwe na -agbachitere ọkọlọtọ dị ka ihe nlele ndị ahịa siri dị, na -eme ụkpụrụ ịdị mma.
Ngwaahịa anyị ebupụla ihe karịrị mba na mpaghara iri abụọ dịka Europe, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Australia, Afrịka, South America na ndị ọzọ. The kwa afọ mmepụta uru esịmde 120 nde yuan.
Na ihe karịrị afọ 20 mmepe
The kwa afọ mmepụta uru esịmde 120 nde yuan.
karịa mba iri abụọ
E hiwere ya na 1992.
Ụlọ ọrụ anyị na -akpachapụ anya nke ọma n'ịhụ na nchekwa na afọ ojuju ndị ahịa bụ ihe kachasị mkpa n'echiche ya. Anyị gbasoro iwu ebumnuche nke kacha mma na injinịa na itinye aka na ọganihu nke teknụzụ, Mee ka ndị ahịa anyị nwee nchekwa nke nchekwa, ịdị mma na arụmọrụ!
Companylọ ọrụ anyị arụpụtala aha maka afọ 20, nweta SGS ISO 9001 na ọtụtụ asambodo ụlọ na asambodo hoist ọkachasị maka mmeri nke asatọ nke National National Foundation Award. Ndị a mesiri obi ike na ihe ịga nke ọma Juren Hositing gafere ọkwa ụwa yana ọsụ ụzọ n'ibuli ngwa ọrụ n'ọdịnihu.
JuRen Hoisting na -agbaso '' iguzosi ike n'ezi ihe, ịdị mma, ọnụ ọnụ, echiche mbụ nke ndị ahịa '' na ezigbo ọrụ ọrụ yana ezigbo ọrụ ndị ahịa.
Companylọ ọrụ anyị arụpụtala aha maka afọ 26, nweta SGS ISO 9001 na ọtụtụ asambodo ụlọ na asambodo hoist, ọkachasị maka mmeri nke asatọ nke China National Foundation Award. Ndị a mesiri obi ike na Hebei JuRen Hositing na -aga n'ihu ịgafe ọkwa ụwa yana onye ọsụ ụzọ n'ibuli ngwa ọrụ n'ọdịnihu.
Nkwakọ ngwaahịa dị mma, nchekwa nchekwa, ọrụ ụgbọ njem ọkachamara, anyị na -ekwenye mgbe niile
Sayensị na teknụzụ na -emepụta mma, ihe ọhụrụ na -eme echi!
Bannon Electric Hoist, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Micro Electric eriri eriri, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Lever Puller, Igwe ọkụ eletrik eletrik,